Tontolon’ny fihirana :: Misy teknika mila fehezina manokana ny feo • AoRaha
Tontolon’ny fihirana Misy teknika mila fehezina manokana ny feo
Tsy sarotra ampiasaina, araka ny fiheveran’ny maro azy, akory ny feo. Samy manana ny azy avokoa ny olona rehetra ary samy mampiasa azy isan’andro. Misy fiofanana farafahakeliny tsy maintsy arahina anefa raha maniry ho lasa mpihira matihanina.
Mandray roa ny hevitry ny hoe matihanina. Ao ireo mivelona tanteraka amin’ny hira, sady matihanina amin’ilay asa no mahafehy tanteraka ny fampiasana ny feony. Misy koa anefa ireo mpihira any anaty antoko mpihira rehetra any. Tsy mba mahay an’izany abidin’ny teknikam-peo izany izy fa tiany fotsiny ny mihira dia niditra ao amin’ny antoko mpihira izy.
“Ho fanampiana azy ireny indrindra no antom-pisian’ny toeram-piofanana mihira sy mifehy ny feo”, hoy i Njatoarimanga Tojoniaina, mpampianatra hira, nanao fikarohana nandritra ny folo taona. Sehatra ahafantarana an’ity manana traikefa matanjaka amin’ny fifehezana ny hira sy feo ity ihany koa ny tontolon’ ny ba gasy. Fiarahana amin’ny tarika R’Imbosa no nahalalana azy. Mpitarika antoko mpihira ny lehilahy ary namaky boky maro nosoratana manam-pahahaizana momba ny feo.
Tsy sarotra ny mihira
Rehefa mazava amin’ny olona iray ny fomba fiforonan’ny feo, ny fomba fampiasana azy ary ny fanatsarana azy hatrany dia izay vao afaka mianatra ireo teknika maro tsy maintsy ilaina mba hahatonga azy ho mpihira matihanina.
“Tsy mba nanana olana tamin’ny feony ny zaza fony vao teraka. Iny hiakiakany mitomany iny, henoy ange! Manao ahoana ny haavony? Sahirana ve izy mamoaka azy? Tsy manana olana mihitsy izy mamoaka azy. Saingy nandritra ny fahazazana dia maro ireo zavatra nihatra sy nasaina nampiharina tamin’ny feony ka nanimba azy. Izay indrindra no antony ilàna ny teknikam-peo, dia ny hanalana ireo fihenjanana ireo mba hiasan’ny feo malalaka tsara. Raha tenenina amin’ny fomba tsotra dia hoe : ny olona rehetra dia afaka mihira avokoa raha toa ka tsy sakanany ny fivoahan’ny feony”, hoy ny fanazavan’i Njatoarimanga Tojoniaina, mpampianatra hira manana traikefa matanjaka nanao fikarohana nandritra ny folo taona.
Endrika famoahana ny hira
Noho izany, tsy ilaina ny mianatra ireo teknika famoaham-peo maro be raha tsy efa manana olana manokana tiana hovahana ny olona iray. “Amiko manokana, tsy ny teknika loatra no zava-dehibe indrindra amin’ny hira. Ny mifanohitra amin’izany aza. Fitaovana iray ilaina amin’ny fanehoana ireo endrika amoahana ny hira fotsiny ihany ny teknika. Ny endrika amoahana ny hira na ny fampitana hafatra no zava-dehibe amin’ny hira. Safidy artistika manokan’ny mpihira ny hafatra tiana ho ampitaina sy ny fomba hahatongavana amin’ny fanehoana izany”, raha ny fanazavan’ity mpampianatra hira ity hatrany.
Manamora ny fianarana atao ny fahafahana mijery izay ataon’ny tena. Indrisy fa tsy azo atao ny mijery ny fitaovana mpamoaka feo ao anaty tenda ao rehefa mianatra hira. Vokatr’izay dia maro ireo fiheveran-diso mikasika ny fomba fiasan’ny feo. Efa azo fantarina tsara anefa ny fomba fiasan’ny tadim-peo na « cordes vocales » amin’izao vaninandro iainan­tsika izao noho ny fivoaran’
“Efa azo atao tsara ny mihira kanefa sady mijery ny fomba fiasan’ny fitaovana famoaham-peo ao anaty ao sy ny fitaovana famoahan-drivotra, amin’izao fotoana izao. Mba hialana amin’ireo fiheveran-diso sy finoanoam-poana mikasika ny feo sy mba ho fitandroana ny fahasimban’ny feo izany rehetra izany. Tombony ny fahalalana izany satria rehefa fantantsika ny fomba fiasan’ny feontsika dia efa mihena ho azy izay ny famerenana tokony hatao”, araka ny fana­zavany.
Nohamafisina fa rehefa manome torohevitra ny mpampianatra hira dia ny hanampiana ny mpihira no tanjony. Lasa hitan’ilay mpianatra ny asa sy ny ezaka tokony hatao raha voafaritra tsara ny olana hovahana. “Tsy nampiharina tsara na diso ny torohevitra nomena matoa tsy manome ny valiny andrasana aminy ny teknika natolotra”,
Tsy mbola nisy fitaovana fanamafisam-peo elektrônika fahiny. Ny mpihira ihany no miezaka mitady izay fomba hahafahan’ny mpihaino, na lavitra na akaiky, maheno ny feony. Teo anatrehan’izay tranga izay dia maro ireo teknikam-peo nivoaka lasa fenitra neken’ny rehetra sy tsy maintsy narahina taty aoriana. Io fomba fihira io ilay antsoina ankehitriny hoe feo “klasika” raha ho an’ny firenena tandrefana.
Rehefa niforona ny fitaovam-panamafisam-peo (microphone) dia afaka nohamafisina avokoa karazam-peo misy rehetra, eny fa na dia ireo feo faran’izay mora indrindra sy tsy azo nohenoina taloha aza. Afaka nampiakarina ny hamafin’ireny. Vokatr’izay, nanjary azo ampitoviana tamin’ny hamafin’ny feo klasika ny an’ny feo natoraly. Hany ka nipoitra avy any indray ireo fomba fihira vaovao, nambara mihitsy aza moa hoe idealy.
Na izany aza anefa dia hita fa sarotra sy mahavizana noho ny fomba fihira klasika ireo fomba fihira vaovao ireo.
Noho ny tsy fisian’ny toeram-pianarana nampianatra ireo fomba fihira vaovao ireo dia tsy maintsy nampiana-tena mba tsy hanimba ny feony ireo mpihira gadona mifangaro. Tsy afa-miankina amin’ny teknika klasika efa nisy anefa izy ireo satria tsy izay no feo tadiaviny. Maro tamin’ireo mpihira gadona maro no simba feo vokatr’izany ka nambara fa mampidi-doza ny karazan-kira ataony. Eny fa na dia misy koa aza mpihira klasika mitovy olana aminy.
Nanambara ho ren-tany sy ho ren-danitra teo ny mpomba ny hira gadona samihafa fa hoe ny tena mpiangaly azy dia tsy maintsy mahay mampiana-tena.
Nisy mihitsy aza no nilaza fa ny fianarana feo no manimba ny maha izy azy ny mpihira. Samy nifampitsara teo ny mpomba ny hira klasika sy ny hira gadona mifangaro, hany ka nahatonga fisarahana tanteraka teo amin’ny hira klasika sy ny hira gadona maro izay mbola misy amin’izao vaninandro iainantsika izao.
Raha jerena anefa dia tsy ny teknika loatra no nahatonga ny fifanoherana fa ny fitiavana manokana an’ilay hira. Tamin’ireo mpihira gadona mifangaro simba feo ireo no nisy ireo nanimba ny feony tamin’ny famerenan-kira ary tsy nivoaka nihira intsony. Ny hafa indray dia nanimba ny feony fony vao nanomboka nihira mihitsy, vokatry ny tebiteby tamin’ny fitetezam-paritra lava be, na vokatry ny teknika mamizana loatra. Fa nisy ihany koa anefa ireo mpihira tafita na dia teo aza ny feony garagara.
« Lakana » any Toamasina
Sakafo mampiavaka ny Malagasy :: Hahatsiaro manokana an’i Chef Mariette Andrianjaka ny « Haify Mampihavana »